MySQL တွင်စားခြင်း၊ အဂတိလိုက်စားခြင်းများရှိခဲ့သည့်ဇယားများကိုမည်သို့ပြန်လည်ပြုပြင်မည်နည်း Linux မှ
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | အကြံပြုပါသည်, ကွန်ရက်များ / ဆာဗာများ
WordPress အတွက် Counterizer plugin ကိုတစ်နှစ်ကျော်ကြာအသုံးပြုခဲ့ပြီးဘလော့ဂ်နှင့်၎င်း၏စာဖတ်သူများ၏စာရင်းဇယားများကိုသိမ်းဆည်းခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က (အခြားအရာများအကြား) ဒေတာဘေ့စ်တွင်ဒေတာ ၆၀၀ မီဂါဝပ်ကျော်သိမ်းဆည်းပြီးကတည်းကဤပလပ်အင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပိတ်ထားသည်။
(plugin ကိုမပိတ်မီနှင့် DB မသန့်ရှင်းမီ) ကျွန်ုပ်သည် database ကိုစွန့်ပစ်ရန်ကြိုးစားသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ .SQL သို့တင်ပို့ပြီး၎င်းကို download လုပ်၍ hosting terminal တွင်အောက်ပါအမှားအယွင်းရှိသည်။
mysqldump: မှားယွင်းမှုရှိသည် - ၁၄၄ - ဇယားကွက် './dl_database/Counterize_Referers' ကို crash အဖြစ်မှတ်သားပြီး LOCK TABLES ကိုအသုံးပြုသည့်အခါနောက်ဆုံး (အလိုအလျောက်?) ပြုပြင်ခြင်းမအောင်မြင်ပါ
ထို့ကြောင့်အမှိုက်ပုံကိုကောင်းစွာမပြုလုပ်နိုင်ပါ။ FromLinux DB တွင်ပြproblemနာအချို့ရှိသည်ဟုတွေးမိရုံမျှဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ဆံပင်ကိုရပ်တန့်စေခဲ့သည်။
ဝဘ်ပေါ်တွင်အနည်းငယ်သုတေသနပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ဤပြproblemနာကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်ဒေတာဘေ့စ်တွင်ပြproblemsနာများရှိသည်မှာမဟုတ်ပါ၊ ဇယားတစ်ခုသည် 'ပြwithနာများ' ဟုမှတ်သားထားခြင်းသာဖြစ်သည်။
ပထမ ဦး စွာ MySQL server ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ကြစို့။
ကျွန်ုပ်တို့သည် [Enter] ကို နှိပ်၍ MySQL root password တောင်းလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုထည့်ပြီးထပ်မံ Enter နှိပ်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည် MySQL ဆာဗာနှင့်အဝေးမှချိတ်ဆက်လိုလျှင် MySQL ဆာဗာကိုကွန်ပျူတာတစ်လုံးတည်း၌ပင်တပ်ဆင်ထားလျှင်ဤ command သည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ IP-OF-SERVER
MySQL ထဲကိုရောက်ပြီဆိုလျှင်မည်သည့်ဒေတာဘေ့စ်ကိုသင်သုံးမည်ကိုပြောပြလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်အထက်ပါအမှားအယွင်းအရပြproblemနာသည်ဇယားတွင်ဖြစ်သည် ကောင်တာ ဒေတာဘေ့စကနေ dl_ဒေတာဘေ့စ်, သောကြောင့်:
ဤလိုင်းများ၏အဆုံးတွင် semicolon —- » ;
ပြီးခဲ့သည့် command ကိုပြီးပြီဆိုလျှင်အရာအားလုံးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားနိုင်သည်။ အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်၏အခြေအနေတွင်တစ်ကြိမ်ထက်မကသောအခြေအနေမျိုးဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ထိုအခါဒေတာဘေ့စ်နှင့် voila ကိုစွန့်လွှတ်ရန်ညွှန်ကြားချက်ကိုထပ်မံလုပ်ဆောင်ရန်သာကျန်တော့သည်။
နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ငါကတစ်စုံတစ် ဦး ကကူညီပေးသည်မျှော်လင့်ပါတယ်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အကြံပြုပါသည် » MySQL တွင်ဇယားကွက်များကိုမည်သို့ပြုပြင်မည်နည်း
ကောင်းသော KZKGGaara ။ PHPMyAdmin သည် console လုပ်နိုင်သောအရာများမရှိပါ။
ဒါပေမယ့်ငါတွေးမိသည်မှာ mysql -u root -p သည် root -u root -p? ငါမှားဖို့မဆိုလိုပါ
သို့သော်ကျွန်ုပ်တွေးမိသည်မှာ၎င်းသည် root -u root -p အစား mysql -u root -p ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်လော ငါမှားယှငျး၏ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲမေးပါ။
ဟားဟား!!!! လုံးဝအမှား LOL!
mysql အစား root ကိုရေးဖို့ရှေ့ကိုခြေလှမ်းလှမ်းပြီးစဉ်းစားနေတယ်။ သတိပေးမှုအတွက် Thanks
ရပါတယ်! နှစ်ဆပို့စ်အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်; ငါ၎င်းကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာပေးပို့ရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီး၎င်းသည်ရှိပြီးသားဖြစ်သည် (ကျွန်ုပ်သည်စာမျက်နှာကိုပြန်ဖွင့်ပြီးဘာမျှမမြင်ရပါ) ကိုပြောခဲ့သည်။
ငါ DB ပြintoနာသို့ရောက်ပြီယခုငါ၏ဆံပင်ထဲကထွက်လာပါတယ်။
မေးခွန်းတစ်ခုမှာ DB ကိုသင်မည်မျှသိမ်းဆည်းမည်နည်း။ အချက်အလက် ၆၀၀ MB အထိရရန်မည်မျှကြာမည်ကိုသိရန်ဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် FromLinux DB တွင်သန့်ရှင်းရေးကိုမလုပ်ဆောင်မီ၎င်းသည် (ဆိုလိုသည်မှာ DB ၏ .sql) သည် 700MB ထက် ပို၍ လေးသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် DB အတွင်းရှိစာရင်းအင်းအားလုံးကိုသိမ်းဆည်းထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်ဘလော့ဂ်၏အစအ ဦး ကနေ။
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ဂူဂဲလ်အေကိုအသုံးပြုနေသည်။ ထို့ကြောင့် DB မှစာရင်းအင်းဇယားများကိုကျွန်ုပ်တို့ဖျက်ပစ်လိုက်သည်။ ယခု .sql သည် 80MB သို့မရောက်ရှိနိုင်ပါ
troll မရှိဘဲ, သင် DB ဘယ်လောက်မကြာခဏစွန့်ပစ်သလဲ
ကျွန်ုပ်၏ localhost တွင် DesdeLinux ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုအမြဲတမ်းကြိုးစားရန်
သင်ဝယ်ချင်ပါတယ် !! ဟုသူကပြောသည်
Juan Mollega ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အကြံဥာဏ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Juan Mollega ကိုပြန်သွားပါ
hernan Barra ဟုသူကပြောသည်
ငါလုပ်ငန်းစဉ်လည်ပတ်နေတယ်ဆိုတာငါသိတယ်ငါ command ကိုတင်ပို့ import ရေးသားခဲ့သည်; ထိုအရပ်၌ငါရှိ၏
hernan Barra ကိုစာပြန်ပါ
Andre Cruz အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ၊ ခင်ဗျားငါ့ကိုကူညီနိုင်မလားမသိဘူး၊ ငါ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာဒီလိုမျိုးဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်၊ ဒီအမှားကိုမှတ်ပါ
wp_posts ဇယားသည်မမှန်ပါ။ အောက်ပါအမှားကိုသတင်းပို့ပါ။ ဇယားသည်ပျက်သွားပြီးနောက်ဆုံးပြင်ဆင်မှုမအောင်မြင်ပါ။ WordPress သည်ဤဇယားကိုပြုပြင်ရန်ကြိုးစားလိမ့်မည် ...
wp_posts ဇယားကိုပြုပြင်ရန်မအောင်မြင်ပါ။ ချို့ယွင်းချက် - ဇယားကွက်သည်ပျက်သွားပြီးနောက်ဆုံးပြင်ဆင်မှုမအောင်မြင်ပါ
အဲဒါကိုဖြေရှင်းဖို့သင်ကူညီနိူင်မယ်မသေချာဘူး၊ ကျွန်ုပ်သည်အဆင့်မြင့် WordPress အတွက်အသစ်ဖြစ်သည်။ wp-post ဇယားကိုပြုပြင်ရန်ကြိုးစားသောအခါ၎င်းသည်ပြန်လည် ပြင်ဆင်၍ မရနိုင်သောအမှားတစ်ခုကိုပြသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ https://diarionoticiasweb.com
Icedove - အလုပ်ခွင်မှာကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုတိုးတက်စေတဲ့အီးမေးလ်ဂလိုင်း
HDMagazine n7ရရှိနိုင်ပါပြီ